लकडाउनमै डाइलासिस गराउने बिरामीको चाप – indepth.com.np
१० बैशाख २०७७, बुधबार १९:४२
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा डाइलासिस गराइरहेका मृगौला बिरामी । तस्बिर : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा लकडाउनकै बीचमा डाइलासिस गराउन पुग्ने मृगौला बिरामीहरु कम भएका छैनन् । केन्द्रका अनुसार अहिले दैनिक ७५ जनासम्मको नियमित डाइलासिस हुँदै आएको छ ।
केन्द्रसँग अहिले तीस वटा डाइलासिस मेसिन रहेका छन् । सोही मेसिनमा दैनि तीन सिफ्ट गरेर मृगौला बिरामीहरुको डाइलासिस गर्दै आएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले केन्द्रमा अन्तरंग र शल्यक्रियाबाहेक सबै सेवा यथावत सञ्चालनमा रहेको बताए ।
सरकारले डाइलासिसका लागि तोकेका अन्य अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा केन्द्रमा चाप बढेको उनी बताउँछन् ।
डाइलासिस रोकिएर मृगौला बिरामीको स्वास्थ्य थप जटिल नहोस् भनी केन्द्रले त्यसलाई सुरक्षित रुपमा निरन्तरता दिँदै आएको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार केन्द्रमा आकस्मिक डाइलासिस गर्नुपर्ने बिरामीहरु पनि आउने गरेका छन् । दिनमा पाँचदेखि सातजनासम्म आकस्मिक डाइलासिस गर्नुपर्ने बिरामी आउने गरेको केन्द्र प्रमुख डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनले केन्द्रमा मृगौला तथा कलेजो प्रत्यरोपण गरेका बिरामी तथा दाता बिरामीहरुलाई दिनेपर्ने आकस्मिक उपचारसमेत नरोकिएको स्पष्ट पारे ।
त्यसको लागि केन्द्रका चिकित्सक तथा नर्सहरुको जिम्मेवारी आलोपालो गरिएको छ ।
लकडाउनको सुरुका दिनमा तीनपटक गर्नुपर्ने बिरामीको डाइलासिस दुईपटकमात्रै गरिएको थियो तर अहिले सबै बिरामीको तीनपटक नै डाइलासिस गरिएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख हरिहर पोखरेलले बताए ।
उनले लकडाउनकै बीच केन्द्र आएका बिरामीहरुको लागि पूर्ण डाइलासिस सेवा दिइरहेको जानकारी दिए ।
केन्द्रमा डाइलासिस गराउने प्रतिक्षासूचीमा भने एकसय ८७ बिरामीहरु रहेको उनको भनाइ थियो ।
लकडाउन लम्बिँदा बिरामी प्रभावित
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन लम्बिँदा मृगौला बिरामीहरु प्रभावित हुन थालेका छन् ।
मृगौला बिरामीहरु प्रभावित हुन थालेपछि केन्द्रका चिकित्सकहरुले उनीहरुसँग फोन सम्पर्कमार्फत आवश्यक परामर्श गर्ने तथा औषधि थप्ने कार्य गर्दै आएको केन्द्रकी नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख डा. कल्पना श्रेष्ठले बताइन् ।
उनले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मृगौला बिरामीहरु बढी प्रभावित भएको सुनाइन् ।
‘लकडाउनका कारण केन्द्रसम्म आउन नसक्ने बिरामीहरुलाई फोनमार्फत नै आवश्यक परामर्श दिने गरेका छौं’, डा. श्रेष्ठले भनिन्, ‘उनीहरुको पुरानो रिपोर्ट भाइबरमार्फत हेरेर आवश्यक औषधि बढाउने गर्दै आएका छौं ।’
उनले मृगौला बिरामीहरुको शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हुने भएकाले उनीहरु बढी कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेको बताइन् । त्यहीं भएर केन्द्रले ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
Related Topics:COVID 19FeaturedHealth